प्रचण्ड साइरन बजाउँदै, सुतेका मान्छे ब्युँझाउँदै हिँड्ने, बालकृष्ण ढुंगेल तिनका लागि जेल गइदिनु पर्ने ? – ढुंगेल | Hakahaki
प्रचण्ड साइरन बजाउँदै, सुतेका मान्छे ब्युँझाउँदै हिँड्ने, बालकृष्ण ढुंगेल तिनका लागि जेल गइदिनु पर्ने ? – ढुंगेल
१३ बैशाख, काठमाडौं । जनयुद्धकालीन मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर्‍याएपछि ओखलढुंगाका एमाओवादी पूर्वसभासद वालकृष्ण ढुंगेल यतिबेला लुकीलुकी हिँडिरहेका छन् । ढुंगेलकै पार्टीको हातमा गृह मन्त्रालय छ, तर ढुंगेल भूमिगत छन् । अनलाइन खबरमा खबर छ ।
‘हिजो हामी गणतन्त्रका लागि युद्ध लडिरहँदा जुम्रा मारेर बस्नेहरु अहिले सत्तामा पुगेका छन्, सिंहदरबारदेखि शीतलनिवाससम्म उनीहरु नै छन् । अनि हामी गणतन्त्रवादीहरु चाहिँ तिनका लागि जेल गइदिनुपर्ने ?’ ढुंगेलले आक्रोश पोखे ।
‘तर, तपाईले उज्जन श्रेष्ठ भुवनको हत्या गरेको होइन ? मान्छे मारेपछि त जेल जानै पर्‍यो नि हैन र ?’ यस्तो प्रश्नमा ढुंगेल अझै तात्तिए– ‘के प्रचण्ड, वैद्य र बाबुराम मेरा कार्यकर्ता हुन् ? के जनयुद्धको कमाण्डर हुँ थिए ? म त उनीहरुको कार्यकर्ताका हुँ ।’ उनले थपे– ‘जनयुद्धमा मान्छे मारिएकै हुन्, हामीले पनि मार्‍यौं, सत्ता पक्षले पनि मार्‍यो ।’
ढुंगेलले अगाडि भने– ‘प्रचण्ड अहिले प्रहरीको गाडी अघि–पछि लगाएर साइरन बजाउँदै, सुतेका मान्छेलाई ब्युँझाउँदै हिँडिरहेका छन्, अनि बालकृष्ण ढुंगेलले चाहिँ जेल गइदिनुपर्ने ? बाबुराम र मोहन वैद्यले जेल जानु नपर्ने, मैले मात्रै किन ? शक्ति बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउन म जेल गइदिनुपर्ने ? यो कसरी न्यायसंगत हुन्छ ?’
आफ्नो पार्टीका नेताहरुको नाम लिँदालिँदै ढुंगेल देउवातिर खनिए । उनले भने– ‘त्यसबेला हाम्रो टाउको लिएर आउन निर्णय गर्ने शेरबहादुर देउवा जेल जानुपर्दैन ? नेपालको संविधानमा कहाँनेर लेखिएको थियो कि सरकारले टाउको ल्याउनेलाई पुरस्कारको घोषणा गर्न पाइन्छ ? बालकृष्ण ढुंगेलले जेल जानुपर्छ भने देउवाले पर्दैन ? त्यसबेलाका गृहमन्त्री वामदेवहरुले जेल जानुपर्दैन ?’
जनआन्दोलनका बेला जनतामाथि गोली चलाउने दूर्जकुमार राई यतिबेला सशस्त्र प्रहरीको कमाण्डर बनेको ढुंगेलले बताए ।
यति भनिसकेर ढुंगेलले नेपाली सेनाका कुमार लामाको नाम लिए । सेनाले त्यसबेला सरकारको आदेश पालना गरेर मान्छे मारेको ढुंगेलले बताए । ‘टाउको ल्याउन आदेश दिनेहरुचाँहि सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका छन्, कर्णेल कुमार लामालाई जेल हालिएको छ, ‘ढुंगेलले अनलाइनखबरसँग भने– ‘म त भन्छु, आदेशको पालना गर्ने लामालाई अन्याय भइरहेको छ ।
जनयुद्धकालमा माओवादी र राज्य पक्ष दुबैले मान्छे मारेको ढुंगेलले बताए । ‘दुबै पक्षले मान्छे मारेकै हो, युद्ध भनेकै मर्ने मार्ने हो,’ उनले भने, विगतमा कांग्रेसले पनि मान्छे मार्‍यो, सुशील कोइरालाले प्लेन अपहरण गरे, अहिलेका एमाले नेताहरु पनि टाउको काटेरै आएका हुन् ।’